ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက် Murphy တို့ရဲ့ဥပဒေများ — Photo-Sales.com
ရောင်းရငွေဓါတ်ပုံ – အင်တာနက်ထဲမှာငွေရှာ
ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက် Murphy တို့ရဲ့ဥပဒေများ
အလင်းသောအခါအလွန်အမင်းအများကြီး မှလွဲ. လုံလောက်အောင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
အလင်းသည်အမှုမှတပါးအခြားသောအရပ်၌ဖြစ်ပျက်ပါဘူး။ Flash drive ကိုဘက်ထရီသည့်အခါအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ညာဘက် frame ကို flash ပေါ်မှာ flash ကိုဆက်တိုက်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာကိုမီးမောင်းထိုးပြမထားဘူး။
ထို Flash ပေါ်လွင်ပါကဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်အဖြစ်ကြောင့်သာဖြစ်သည်။
သင်ကနေမှအလင်းသတ်မှတ်ထားပါက – တစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ်လည်းရှိ၏။
သင်က WB သတ်မှတ်ထားပါက – ထိုအလင်းရောင်ပြောင်းလဲမှု၏အရောင်။
(- ပြတင်းပေါက် + မီးချောင်း incandescent မီးသီးများကနေမိုဃ်းလင်းသည်ကောင်းစွာ, ဥပမာ) – သင်ကရှုပ်ထွေးသောလောကရှိရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်သောဖွဲ့စည်းမှုသည် frame ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအလင်းရရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်က flash ကိုတစ်ပျံ့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် – မျက်နှာကျက်နှင့်နံရံအစဉ်အမြဲရှိကြသည်။
သင်က flash ကိုရှိသမျှဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူရောက်နေတယ်ဆိုရင် – (နှမြောဘဲအစုအိမ်မှာသို့မဟုတ်ဆေးရုံကဆင်းဖြစ်စေ) ဘက်ထရီများ၏ထွက်ပြေးလေ၏။
2. Technique ။
Flash ကိုကဒ်နှင့်ဘက်ထရီအလက်ရာမီအတိအကျတဦးသည် frame ကိုအဆုံးသတ်!
ကင်မရာကိုအိမ်တွင်လာသောအခါ – သင်၏အရှေ့တွင်မှာအကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများ။
ISO ကို (သင်တန်းထား 1600+ ၏) ပုံတူပန်းချီကားများရေးဆွဲခြင်းစီးရီးပြီးနောက်ဓြှု။
သူ့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကချောင်းကိုဆွဲယူ, ဇိမ်ခံလမ်းပေါ်မြင်ကွင်းတစ်ခု Shoot ။
autofocus အမြဲချိုးဖဲ့! (မှန်ပါတယ်, ဒီ SLR အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်)
auto white balance ကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးအရှိဆုံးန်ထမ်းများပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေသည်။
တစ်ဦးကသုံးချောင်းထောက်တစ်ဦးခြေထောက် fixed နှင့်သူအိပ်တော့မယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်မိနစ်နှင့်ထိတွေ့မှု၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ညဥ့်အခါရိုက်ကူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မဟုတ်။
ရုပ်ပုံတပုံကိုယူပြီးနောက်မှန်ဘီလူးအဖုံးကိုဖွင့်တဲ့ချုံ elk နောက်ကွယ်မှမှထင်ရှား၏။
ညာဘက်အချိန်မရွေး flash ကိုထားအစားထိုးအတွက်ဘက်ထရီပျောက်ဆုံး
အပြာရောင် Rush – အသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပုံတူခုနှစ်တွင်ပောက်သံ twigs နှင့်အတူခိုင်ရှပ်နှင့်ဆောင်းတွင်းရှုခင်းပါဝင်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဝန်ဆောင်မှုသူကြီးအကျိန်ပြီးနောက် – လစုံတွဲတစ်တွဲကျင်းပလျက်, ဝန်ဆောင်မှုအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲလိပ်စာကိုပြောင်းလဲ
အလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေကိုနှင့်အတူပြုပြင်ရန်ထုတ်ဆောင် ခဲ့. ကဲ့သို့တူညီသောညဦးယံ၌ကင်မရာကိုအားလပ်ချိန်။
(တစုံတယောက်ကိုဦးတည်ချက်ကိုတွင်သာတစ်ပတ်လျှင်ပေးပို့ခြင်း) ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အာမခံပြုပြင်ရန်ထိုသို့တဦးတည်းဖြစ်စေပြီးမှ, လုံးဝအခြားအရာတစ်ခုခုကိုလုယက်ဖျက်ဆီးသောအထဲကပြန်သွားလေ၏။
အား developer အတွက်စက္ကူပေးပို့သည့်အချိန်ကိုရေချိုးခန်းအတွင်းခေတ်မီဆန်းပြားပုံနှိပ်မီဒီယာ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကတစ်စက္ကန့်အတွက်အလင်းကိုအပေါ်ပြန်သွားလေ၏။
စျေးအကြီးဆုံးဓာတ်ပုံစက္ကူအားလုံး illuminated ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြုတ်တပ်ဦးခေါင်းနှင့်အတူ4tripod တွေရှိပါတယ်လျှင်, ကျွန်အပေါင်းတို့ဦးခေါင်းလဲလှယ်ကြပါဘူး။
စျေးအကြီးဆုံး filter ကိုမှာအားလုံးမသုံးခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ကင်မရာမှန်ဘီလူး Telephoto ပူးတွဲပါလျှင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တစ်ခုခုကိုအလွန်နီးစပ်ပါလိမ့်မည်။ အလားတူပင်အခါ wide-angle ဓာတ်ပုံပြပွဲမှန်ဘီလူး – သွားသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်ခုခု။
သင်နိုင်တဲ့ macro lens ကိုသို့မဟုတ်နိုင်တဲ့ macro ကွင်းကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် – ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောဇိမ်ခံပန်းပွင့်, အင်းဆက်ပိုးမွှားဖမ်းမိ
သုံးချောင်းထောက်, အိမ်မှာမေ့နေတာလားအသုံးမဝင် … tripod တစ်တိုးမြှင်ယူ, သင်တိုင်းအချိန်လိုပါတယ်။
ထို zoom ကိုအကွာအဝေးနှင့်အတူရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာအစဉ်အမြဲမလောက်မဖြစ်
ပရင်တာနှင့်အရောင်မုသား Monitor ။ အမြဲတမ်းအ။ ဒါပေမယ့်အခါတိုင်းအသစ်တစ်ခုလမ်း။ ရလဒ်အတိုင်း, တို့အပေါ်ခြေရာထင်သင်လိုချင်သည့်အရာကိုအမြဲမဟုတ်ပါဘူး။
ပရင်တာအတွက် Paint ကြောင့်အရေးတကြီးကျိုးများမှာအလွန်ရှားပါးအဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတစ်ဦး၏ဓာတ်ပုံကိုပုံနှိပ်ရန်လိုအပ်သောအခါယခုအချိန်တွင်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
unique ဓာတ်ပုံတစ်စုံတစ်ဦး dampen သို့မဟုတ်လျက်ကြလိမ့်မည်, ရေစိုခံ, မင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးကကြောင်အများဆုံး inopportune ယခုအချိန်တွင်ကွန်ပျူတာ (Off) Overload နိုင်ပါတယ်။
ကင်မရာမှာမဂ္ဂါပစ်ဇယ်အရေအတွက်၏အမြဲတမ်းမှန်ဘီလူးခွင့်ပြုထက် သာ. ကြီးမြတ်၏။
ကိုင်တွယ်ရန်လည်းအများကြီး, ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ဆူညံသံ။ နှင့်ပုံနှိပ်ရှုခင်းနှင့်သီးနှံအနည်းငယ်သာ။
အထက်2အတန်းထဲသို့ကင်မရာသို့စကိုကင်မရာမှန်ဘီလူး၏နေရာတွင်အစားထိုးသင်အသစ်ပင်သင်္ကာမကင်းမခံခဲ့ရအဟောင်းတွေပြဿနာများ, အသစ်တွေအများကြီးဖန်တီးဖြေရှင်းရေးကိုငါသိ၏။
ကင်မရာမှာဘက်ထရီဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဘို့မလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဦးအားလပ်ဝယ်ပါ here – အစားထိုးနေရာလေးကိုကြွလာဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆဲလိုအပ်လျှင်, ထိုကြောင့်ဆေးရုံကဆင်းသည်။
အုပ်စုဇာတ်ကားဆုအတွက် yawns နှင့်သူ၏မျက်စိကိုပိတ်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမ yawns လျှင်, တစ်စုံတစ်ဦးနှာချေ။
သင်ချောကလက်အားဖြင့်လူးလှပစွာဆွဲဆောင်မှုမျက်နှာဖမ်းဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်, သင်တို့သည်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချိန်, Wee အဝတ်သို့မဟုတ်အခြေအနေကို၏အထင်ရှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းဆွဲဆောင်မှုမျက်နှာသုတ်။
Bird ကို (သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်) အမြဲမှန်ဘီလူးထုပ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေရှေ့တော်၌ပြပ်ထိုင်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကင်မရာကိုရိုက်ကူးနှင့်ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းရန်အများစုဟာသစ္စာရှိ။
ထိုဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းမှာပေါင်းစပ်မော်ဒယ်အဆင်သင့်ဖြစ်, အဆင်သင့်ဓာတ်ပုံဆရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ဥပစာ – လုနီးပါးအံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးမော်ဒယ်မှာအဝတ်မပတ်ဝန်းကျင်တွင် (- ထို flash မှမိတ်ကပ်ထူးဆန်းတဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်အလင်းနှင့်အတူ ‘option ကို) နဲ့အညီလာပါတယ်။
အစားကိုဂရုတစိုက်ဆောက်လုပ်ထားသည် frame ထက်အစောဆုံးနှင့်အဖြစ်ဆုံး, ကျပန်းစကားမှာယူခဲ့ပြီး, – ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှာအကောင်းဆုံးရိုက်ချက်များ။
သင်သည်မိုဃ်းကိုရွာစေခြင်းမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသင်နှင့်အတူယူပါက, အခြောက်အရလိမ့်မည်။ အိမ်, ထို့နောက်မိုဃ်းကိုရွာစေမှာထီး (cover) ပါ။
စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးအပေါ်လူတွေအများကြီးသွားသည့်အခါမဟုတ်, ထိုလူလာနဲ့ designated အချိန်၌မပြုပါ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး Plan ကိုအချိန်မဖြစ်နိုင်ပါ!
ဗိသုကာအတတ်ပညာ ဓါတ်ပုံတွေ နောက်ခံ ဝေါလ်ပေပါကို HD နောက်ခံ နောက်ခံပုံများ လှသောအဆင်း အတတ်ပညာ လှပမှု အတတ်ပညာ ပြာသော ဓါတ်ပုံတွေ အဆောက်အဦး ဝေါလ်ပေပါကို HD အရောင် ဓါတ်ပုံ Crimea ဓာတ်ပုံများ ယဉျကြေးမှု ပန်းချီ နေ့ ဝေါလ်ပေပါကို HD ပတ်ဝန်းကျင် ဓါတ်ပုံတွေ ဥရောပ ပုံရိပ်တွေ HD ကို ကျြောစောသော ပုံရိပ်တွေ သစ်တော နောက်ခံပုံများ ဥယျာဉ်တော် ပုံရိပ်တွေ HD ကို စိမ်းလန်းသော ရုပ်ပုံ တောင်ကုန်း နောက်ခံပုံများ သမိုင်း clipart အိမ် ပန်းချီ ရှုခင်း ဝေါလ်ပေပါကို HD အရွက် ပန်းချီ တောင် သဘာဝက နောက်ခံပုံများ သဘာဝ နောက်ခံပုံများ ဟောင်းနွမ်း နောက်ခံပုံများ ပြင်ပတွင် ဓာတ်ပုံများ အိမ့်ပြင်တွင် ကားပုံ ပန်းခြံ ကားပုံ စက်ရုံ ဓါတ်ပုံတွေ အပင် HD ကို ကြောကျ ဝေါလ်ပေပါကို HD မြင်ကွင်းတစ်ခု ပန်းချီ ပင်လယ် ပုံရိပ်တွေ ရာသီ နောက်ခံပုံများ မိုးကောင်းကင် ပန်းချီ ကြောကျ HD ကို နွေရာသီ ကားပုံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပုံရိပ်တွေ ရဲတိုက် ရုပ်ပုံ ငြိမ်းချမ်း ပုံရိပ်တွေ ခရီးသွား ပုံရိပ်တွေ သစ်ပင် ဓါတ်ပုံ ကြည့်ရှုခြင်း HD ကို ရေ HD ကို
© Copyright 22nd of October 2021 21:29:26 All rights reserved Photo-Sales.com.